Ibsa Ijjannoo KQWUO | Biiftuubilisummaa
← Ibsa Ijjannoo Barattoota Oromoo miseensa OPDO Yunivaristii Finfinnee
Diddaan Barattoota Oromoo Wayyaanee Yaaddesse. Fincillis Itti Fufe, →
Ibsa Ijjannoo KQWUO
Posted on February 2, 2012	by biiftuubilisummaa
KQWUOn walga’ii teessumma bal’aa Amajjii 30 2012 gaggeeffateen haala waliigalaa hanga ammaa keessa jiru ilaalchisee, injifannoowwan argate, gufuuwwan qunname, humna hanga ammaatti horate, haala diinaa, fi kallattii deemsa fuula duraa bal’inaan gamaaggamudhaan marii bal’aa erga taasisee booda, Karoora yeroo gabaabaa fi dheeraa raggaasisudhaan Ibsa Ijjannoo armaan gadii baafateera.
KQWUOn rakkoo hammaataa yeroo ammaa ummanni Oromoo keessa galee jiru dhuma itti gochuuf qorannoo gaggeessee ture irratti hundaa’udhaan Qeerroo waliin ta’uun Amajjii 22, 2012 labsii Waamicha Warraaqsaa gamtaadhan labsuun ni yaadatama. Waamicha qabsoo taasifame kanaaf owwaannaan ummanni keenya taasisuu eegale haalan kan nu onnachiisee fi jajjabeessaa ta’uu ibsaa Warraaqsa eegalame kana sadarkaa olaanatti ol guddisudhaan mootummaa Wayyaanee foon ummata keenyaa fixxee lafee nu qorqaa jirtu hundeen ofirraa fonqolchuuf ummanni keenya tumsa eegale cimsee akka itti fufu ammas irra deebinee Waamicha dhageessifanna.
Qorannoo KQWUOn gaggeessen walqabatee gaaffii mirgaa Qonnaan Bultoonni naannawa Finfinnee fi barattootni Oromoo Yunivaristii Finfinnee karaa nagaa xalayaa iyyannoodhaan gaafataniif deebii jala-deemtonni Wayyaanee deebisaniin rakkoon ummata Oromoo karaa nagaa deebii argachuu akka hin dandeenye eenyuyyuu caalatti akka hubatu kan taasise yoo ta’u, deebii karaa nagaa dhabame kanarratti hundaa’uun Warraaqsa eegalameen wal qabatee Wayyaaneen sochii jiru ukkaamsuuf “Walga’ii hariifachiisan” sardamuuni fi waraana baayyina ummataa gitu magaalotaa fi Yunivaristiilee Oromiyaa mara keessa qubachiisuun ishii hangam ummata Oromoo irratti dhumiinsa suukkanneessaa/duguuginsa sanyii/ raawwachuuf of qopheessaa akka jirtu ifaan kan nutti agarsiisu waan ta’eef, ummanni Oromoo olola itti-fakkeessa Wayyaanetiin osoo hin raafamin diina nurra taa’ee eboo nutti qarachaa jiru kanaaf furmaanni waaraan danbalii Sochii ummataa kaasuun gartuu gabroomfattuu tana ofirraa fonqolchuu waan ta’eef, ummanni Oromoo bakka jiruu garaagarummaa tokko malee tokkummaadhaan Warraaqsa eegalame kanatti akka dabalamu Sagalee ol-kaatudhaan waammanna.
KQWUOn gaffilee karaa nagaa gaafatamanii deebii dhabaniif furmaanni waaraan Warraaqsa ummataa kaasuu akka ta’e itti amanuudhaan Waamicha Qabsoo taasiseen injifannoo gurguddoo galmeessiseera. Keessayyuu tokkummaa barattoota Oromoo irratti gufuu guddaa ta’aa kan ture, shira diinni barattoota Oromoo miseensummaa OPDOtiin qabattee humna dhabsiisaa turte, kana booda hin gowwoomnu yaada jedhuun barattootni Oromoo “rakkoo akka sabaatti ummata keenyarra jiru akka sabaatti tokkummaadhaan falmanna” jechuudhaan ejjannoo fudhachuu eegalaniiru. kanarratti injifannoon Yunivaristii Finfinnee, yunivaristii Amboo fi yunivaristii Jimmaa keessatti argame kan akka laayyootti ilaalamuu miti. Warri biroos fakkeenyummaa kana fudhachuudhaan tarkaanfii wal fakkaatoo akka fudhatan dhaamsa dabarsinaaf.
Bu’aa qorannoo gaggeeffame ummatatti facaasudhaan, dhaamsa Waamicha Warraaqsaf dabarfame walitti labsuudhaan, akkasumas dhaadannowwanii fi Waraqaa labsii iddoowwan murteessaa ta’anitti maxxansuudhaan tumsa ummanni keenya taasise seenaa QBO keessatti iddoo olaanaa qaba. Galanni keessan BILISUMMAA haa ta’u jechaa Ummanni Oromoo bakka jiruu tumsa akkasii kana ammas jabeessee akka itti fufu dhaammanna.
Shira mootummoonni Habashaa waggota dheeraaf xaxaa turan irraa kan ka’e qabsoo ummanni Oromoo gaggeessu biyyootni fi uummattootni baayyeen ija shakkiin akka ilaalan taasiseera. Kanarraa kan ka’e deeggarsi maallaqaas ta’ee deeggarsi bifa kamiiyyuu ummata Oromoorraa kan hafe qaama alaa irraa baayyee hin abdatamu. Kanaaf ummanni Oromoo, keessayyuu kan biyya alaa Warraaqsi eegalame kun galma gahuudhaan QBO akka dhugoomsuuf bakka jirtaniitti hiriira nagaa bahuudhani fi biyyoota addunyaatti sagalee biyya keessaa nuuf dhageessisuudhan nu tumsuun akkuma jirutti ta’ee galma-ga’iinsa Warraaqsa kanaaf deeggarsa bifa hundaa akka nuuf gootan Sagalee marartuun isin waammanna.
Gadaan Gadaa Milkiiti!